I0coin စျေး - အွန်လိုင်း I0C ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို I0coin (I0C)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ I0coin (I0C) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ I0coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $232 539.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ I0coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
I0coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
I0coinI0C သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0341I0coinI0C သို့ ယူရိုEUR€0.0291I0coinI0C သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0262I0coinI0C သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0313I0coinI0C သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.308I0coinI0C သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.217I0coinI0C သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.761I0coinI0C သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.128I0coinI0C သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0454I0coinI0C သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0478I0coinI0C သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.766I0coinI0C သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.265I0coinI0C သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.184I0coinI0C သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.55I0coinI0C သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.75I0coinI0C သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0469I0coinI0C သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.052I0coinI0C သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.06I0coinI0C သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.237I0coinI0C သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.64I0coinI0C သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩40.49I0coinI0C သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦13.13I0coinI0C သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.5I0coinI0C သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.943
I0coinI0C သို့ BitcoinBTC0.000003 I0coinI0C သို့ EthereumETH0.00009 I0coinI0C သို့ LitecoinLTC0.000631 I0coinI0C သို့ DigitalCashDASH0.000389 I0coinI0C သို့ MoneroXMR0.000393 I0coinI0C သို့ NxtNXT2.7 I0coinI0C သို့ Ethereum ClassicETC0.00504 I0coinI0C သို့ DogecoinDOGE10.31 I0coinI0C သို့ ZCashZEC0.000427 I0coinI0C သို့ BitsharesBTS1.3 I0coinI0C သို့ DigiByteDGB1.11 I0coinI0C သို့ RippleXRP0.121 I0coinI0C သို့ BitcoinDarkBTCD0.00119 I0coinI0C သို့ PeerCoinPPC0.114 I0coinI0C သို့ CraigsCoinCRAIG15.79 I0coinI0C သို့ BitstakeXBS1.48 I0coinI0C သို့ PayCoinXPY0.605 I0coinI0C သို့ ProsperCoinPRC4.35 I0coinI0C သို့ YbCoinYBC0.00002 I0coinI0C သို့ DarkKushDANK11.11 I0coinI0C သို့ GiveCoinGIVE75.01 I0coinI0C သို့ KoboCoinKOBO7.9 I0coinI0C သို့ DarkTokenDT0.0314 I0coinI0C သို့ CETUS CoinCETI100.02
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 00:25:03 +0000.